November 2018 - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
အရေးပေါ်တားဆေးဆိုတာ ဘာလဲ?ဘယ်အချိန်မှာသုံးမလဲ? နံမည်ကိုက ‘ အရေးပေါ်တားဆေး ‘ မို့ …. အရေးပေါ်လိုအပ်တဲ့ အခြေအနေမှပဲ သုံးသင့်ပါတယ်။အမြဲသုံးဖို့ မသင့်တော်ပါဘူးနော်။ (***အမြဲသုံးဖို့ မသင့်တော်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ သူ့ရဲ့ သန္ဓေတားနိုင်စွမ်းက ၈၅% လောက်ပဲရှိတာကြောင့်….သင်စနစ်တကျအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တောင်မှ သုံးဖန်များလာတဲ့အခါ …တစ်ချိန်ချိန်မှာ မမျှော်လင့်ဘဲ…
ပျားရည်သံပုရာက တကယ်ပဲ ဗိုက်ချပ်စေသလား? ပျားရည်သံပုရာနဲ့ဗိုက်ချပ်အောင်လုပ်တဲ့နည်း ဝိတ်ချတဲ့နည်း ကတော့ မိန်းကလေးတွေကြားမှာ တော်တော် ရေပန်းစားတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ မိန်းကလေး သဘာ၀ အတိုင်း အသက်လေး နည်းနည်းကြီးလားလို့ဖြစ်ဖြစ်၊ အစားလေး နည်းနည်းများများ စားမိရင် ဖြစ်ဖြစ်၊ ရုံးမှာ အထိုင်များတာဖြစ်ဖြစ်…
Pros and cons of diaper usage
Diaper အသုံးပွုခွငျးရဲ့ ကောငျးကြိုး၊ ဆိုးကြိုးမြား ကောငျးကြိုးမြား -အသုံးပွုရလှယျကူတယျ။ -တဈခါသုံးပွီး စှန့ျပဈနိုငျတာမို့ ပွနျလြှောျဖှပျရတဲ့ ဒုက်ခက ကငျးဝေးစတေယျ။ -ကလေးနဲ့ ခရီးသှားရာမှာ diaper အသုံးပွုရငျ ပိုအဆငျပွတေယျ။ လူကွားထဲ အနံ့ထှကျခွငျး၊ ပကေနြျခွငျးတှမှေ ကငျးဝေးစတေယျ။ -ယိုစိမ့ျတာတှကေို ကာကှယျပေးလို့…
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင် နှင့် ဖောလစ်အက်ဆစ် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေအတွက် အရေးကြီးလိုအပ်တဲ့ အားဆေးတစ်မျိုးကို လမ်းညွှန်ပါဆိုရင် folic acid(ဖောလစ်အက်ဆစ်) ကိုညွှန်ရမှာပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေ folic acid မှီဝဲခြင်းဖြင့် ဝမ်းဗိုက်ထဲက ကလေးငယ်တွေမှာ မွေးရာပါ ဦးနှောက်နဲ့ အာရုံကြောဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းမှုများမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ✏…
" Protection of Dry Skin in Winter "
“ဆောင်းရာသီတွင်း အသားမပတ်အောင် ဘယ်လို ကာကွယ်ရမလဲ” “အလွန်အေးတဲ့ ရာသီ… အလွန်ချမ်းတဲ့ရာသီ” ဆောင်းတွင်းဝင်လာတော့.. အချမ်းပိုပြီး.. အအိပ်ပိုမယ်.. အိပ်ရာထဲကွေးကောင်းတာနဲ့အတူ..အားကစားလိုက်စားသူတွေအဖို့ကျပြန်တော့ မနက်ခင်း အအေးလေးပိုနေချိန် ပိုအားစိုက်လို့ရပြန်သလို.. မဖြစ်မနေ အလုပ်ရှိလို့ မနက်ထရသူတွေ.. အပြင်သွားရသူတွေအဖို့… ဂရုစိုက်ရမယ့်အရာကတော့.. အသားအရေပါပဲ… အရေပြားဟာ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာ…
ခြေဖနောင့်ကွဲခြင်းမှ သက်သာစေဖို့ရာ ဒီခေတ်ကြီးမှာ နေ့ဓဒူဝ လှုပ်ရှားသွားနေကြရတဲ့ လူသားတွေအဖို့… ကျန်းမာရေးကိုသေချာ ဂရုစိုက်ဖို့ရာ လိုအပ်ပါတယ်.. ဒီလိုသွားလာနေရတဲ့ထဲမှ ခန္ဓာကိုယ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ထိခိုက် ဒဏ်ရာရတဲ့အခါမှာ နှောင့်နှေးတာတို့၊ အလုပ်မဖြစ်လိုက်တာတို့ ရှိတတ်ပါတယ်… accident ကြောင့် ဖြစ်စေ၊ ရာသီဥတုကြောင့် ဖြစ်စေ ဘယ်သူမှ…
ကိုယ်ဝန်နှင့် ဖောရောင်ခြင်း ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် အမျိုးသမီးအများစုဟာ ဖောရောင်ခြင်း ဝေဒနာတွေကို ခံစားရတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် သန္ဓေသားရဲ့ ကြီးထွားမှုကိုလိုက်ပြီး သွေးနဲ့လိုအပ်တဲ့ အရည်တစ်ချို့ကို ကိုယ်ခန္ဓာမှ ပိုတိုးထုတ်ပေးရတဲ့အတွက် မျက်နှာ၊ ခြေ၊ လက်နဲ့ ခြေကျင်းဝတ် နေရာတွေမှာ ဖောရောင်လာရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သန္ဓေသားလွယ်ထားစဉ် မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို…
ရာသီလာတဲ့နေ့တွေကို ဘာကြောင့်မှတ်ထားသင့်သလဲ? ရာသီလာတာဟာ အမျိုးသမီးတွေအတွက်ကြုံတွေ့နေကြ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ လစဉ်လတိုင်းကြုံနေကြဖြစ်သလို မထူးဆန်းတော့တဲ့အတွက် ပေါ့ပေါ့ဆဆနေတတ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ မိမိရဲ့dateကိုမသိပဲ နောက်ကျနေတာကို အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နေတတ်ကြပါတယ်။ ကောင်းတဲ့အပြုအမူတစ်ရပ်အနေနဲ့ မိမိရဲ့သက်ဆိုင်ရာရက်စွဲကိုသေချာမှတ်ထားသင့်ပါတယ်။ အကြမ်းဖျင်းအနေနဲ့တော့ ပုံမှန်ရာသီစက်ဝန်းတစ်ခုဟာ 28ရက်ပျမ်းမျှကြာပါတယ်။ အမျိူးသမီးအချို့ကတော့ 28 ရက်ထက်စောတာ နောက်ကျတာရှိပါတယ်။ ပုံမှန်စက်ဝန်းတစ်ခုကို…